2014 | ဂန္တ၀င် | Page 10
Shwe Myanmar Media (http://www.shwemyanmarmediagroup.org)
Shwe Myanmar Media ဆိုဒ်သည် သတင်းမီဒီယာ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းများအပြင် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် အခြား အလှအပဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာရေးသတင်းများ၊ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍများပါ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သတင်းစုံဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ Link: http://www.shwemyanmarmediagroup.org Shwe Myanmar Media Shwe...
Freedom News Group (http://freedomnewsgroup.com)
Freedom News Group သည် အွန်လိုင်း သတင်းစာ ဆိုဒ် အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ Freedom News Group သတင်းဆောင်းပါ၊ ပြည်တွင်းသတင်း၊ ပြည်ပ သတင်းများ၊ နည်းပညာသတင်း၊ ဖက်ရှင်၊ ရုပ်ရှင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဖြင့်တင်ပြပေးနေသော သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Link: http://freedomnewsgroup.com Freedom News Group,...
Myanmar Goal (http://myanmargoal.com/)
Myanmar Goal isawebsite only for football lovers. Myanmar Goal updates all the breaking news about football; locally and globally. From World Cup...